घटना हुनुभन्दा १ दिन अघि गर्लफ्रेन्डलाई लिएर कहाँ गएका थिए सुशान्त ? उनीहरुको सम्बन्ध कस्तो थियो ? आत्महत्या पछि खुल्यो बल्ल यो कुरा ! – live 60media
घटना हुनुभन्दा १ दिन अघि गर्लफ्रेन्डलाई लिएर कहाँ गएका थिए सुशान्त ? उनीहरुको सम्बन्ध कस्तो थियो ? आत्महत्या पछि खुल्यो बल्ल यो कुरा !
← सधैका लागि अधुरै रह्यो बुहारी भित्राउने सुशान्तको बुबाको सपना, बेहोस अवस्थामा छन् उनि !
रुकुम पछीको अर्को दर्दनाक घटना पानी भन्न नपाई ९ जनाको गयो ज्यान →